'အဖေ့ရဲ့ တတ်တဲ့ပညာနဲ့ သမီးကို ပညာတတ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင် သမီး တတ်တဲ့ပညာနဲ့လ?? - Yangon Media Group
မေး – ကိုနိုင်ဇော်ရဲ့ သမီးဖြစ်သူနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါဦး။
ဖြေ – ကျွန်တော့်သမီးလေးနာမည်က တော့ မမိုးဖြူစင်ဇော်ဖြစ်ပါတယ်။ သမီးက သိပံ္ပဘာသာတွဲကို ဘာသာစုံဂုဏ်ထူးနဲ့ အထက ၄ ပုစွန်တောင်ကျောင်းကနေ ဖြေ ဆိုအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ဖြေဆိုနိုင်တာကြောင့် ကျွန်တော်တို့မိဘတွေ အနေနဲ့ အတိုင်းမသိဝမ်းသာရပါတယ်။
မေး – သမီးကိုရော အခုလို ဘာသာစုံ ပါမယ်လို့ မျှော်မှန်းထားလား။
ဖြေ – ကျွန်တော်တို့က သမီးကို အခုလို မျိုး ဘာသာစုံပါမယ်လို့တော့ မမှန်းထားပါ ဘူး။ အများဆုံးဂုဏ်ထူးပါရင် လေးဘာ သာ၊ ငါးဘာသာပဲပါလောက်မယ်ထင်ပါ တယ်။ စာမေးပွဲဖြေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ သမီးကပြောတယ် ဖြေနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂုဏ်ထူးအများကြီးတော့ မမှန်းထားဘူး လို့ ပြောပါတယ်။
မေး – သမီးကိုရော အခုဆယ်တန်း လည်းအောင်သွားပြီဆိုတော့ ဘာဖြစ်စေ ချင်တာရှိမလဲ။
ဖြေ – သမီးလေးကို ကျွန်တော်တို့က တော့ ဆေးကျောင်းတက်ပြီးတော့ ဆရာဝန် ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အမျိုးထဲ မှာလည်း ဆရာဝန်မရှိသေးတော့ သူ့ကိုဖြစ် စေချင်တယ်။ မိန်းကလေးဆိုတော့ အင်ဂျင် နီယာအလုပ်တွေနဲ့ကလည်း မသင့်တော် တာကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။ သမီးကတော့ ပထမတော့ စာသင်တာကိုဝါသနာပါတယ် လို့ ပြောပါတယ်။ အခုကတော့ ပါပါးတို့ ဖြစ် စေချင်တာကိုလည်း လုပ်ပါ့မယ်လို့ပြောပါ တယ်။ ဆေးကျောင်းတက်ပြီးတော့ ဆေး ကျောင်းမှာပဲ ပြန်ပြီးတော့ သင်ပြတဲ့ဆရာမ အဖြစ်လည်း လုပ်ချင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သူ့ကိုလည်း သူဖြစ်ချင်တာကိုလည်း လွတ် လွတ်လပ်လပ်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးပါတယ်။ သမီး ကို အများအကျိုးပြုတဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ် စေချင်ပါတယ်။ ငွေနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူမျိုး မဖြစ်စေချင်ပါ။ တချို့ဆရာဝန်တွေဆိုရင် သူများရဲ့အညစ်အကြေးတွေကို သေချာကို လုပ်ပေးပြီး ကုသပေးတယ်ဆိုတာ စိတ်ဓာတ် မွန်မြတ်မှ လုပ်ပေးလို့ရတာကြောင့် သမီးကို အဲဒီလိုဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ အဖေရဲ့ တတ် တဲ့ပညာနဲ့ သမီးကို ပညာတတ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင် သမီးတတ်တဲ့ ပညာနဲ့ လူတွေကို အကျိုးပြုစေချင်တယ်။
မေး – သူ့အနေနဲ့ရော ဒီလို အောင် မြင်ဖို့ ဘယ်လောက်ကြိုးစားခဲ့ရလဲ။
ဖြေ – သမီးလည်းအရမ်းကို ပင်ပန်းခဲ့ ပါတယ်။ ကိုးတန်းကျောင်းပိတ်တဲ့ အချိန် ကတည်းက ဒီဆယ်တန်းကိုဖြေဖို့အတွက် တော်တော်ကို ကြိုးစားပြီးတော့ ပြင်ဆင် လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မေး – သမီးကိုရော မိဘတွေအနေနဲ့ ဘယ်လောက်ထိ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ရလဲ။
ဖြေ – အဓိကကတော့ ကျွန်တော် အမျိုးသမီး။ သူ့အမေပါပဲ။ သူက သမီး ကို ကျွန်တော့်ထက်ပိုပြီး ၉ဝ ရာခိုင် နှုန်းလောက်ပိုပြီး တာဝန်ယူဂရုစိုက်ပါ တယ်။ ကျွန်တော်က အမှန်တိုင်းပြောရ ရင် အလုပ်ကိစ္စများနေပါတယ်။ ခရီး ထွက်တာတွေလည်းရှိတော့ သူအမေက သမီးကို ပိုပြီးတော့ဂရုစိုက်ရပါတယ်။ ပြောရရင်တော့ သူ့ အမေကလဲ တော် တော်လေး ပင် ပန်းပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်စာမေးပွဲ မဖြေရုံတစ်မယ် ပင်ပန်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ရေးပျက်တာ တွေကလည်း နှစ်နဲ့ချီနေပြီ လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ က လေးကိုယ်တိုင်လည်း အ ရမ်းကို ပင်ပန်းခဲ့ပါတယ်။ သူ့အမေ အခုလို အပင် ပန်းခံနိုင်လို့လည်း သမီး အခုလို အောင်မြင်တာလို့ ထင်ပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံတကာအရန်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၅ ဘီလီယံအထိတိုးလာ
‘အရမ်းကို အားနွဲ့တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ကာရိုက်တာဆိုရင်တော့ မေသော့်အတွက် အရမ်းကို ခက်ခဲတယ်??
ပြည်သူ့ ဥယျာဉ်တွင် ကျင်းပသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယောဂနေ့ အခမ်းအနားတွင် လူဦးရေ ၃ဝဝ ကျော် ပါဝင